Waxay umuuqataa in usbuucan aanan heli doonin noocyada beta ee macOS | waxaan ka imid mac
Waxay umuuqataa in todobaadkan aynaan yeelan doonin noocyada beta ee macOS
Waana inaan horey u nahay Jimcaha ka dib usbuucii la soo dhaafay Apple waxay soo saartay laba nooc oo beta ah oo ah macos ficil ahaan isku xigxiga, toddobaadkan waxay umuuqataa inay dhamaanayso Ma jiro nooc beta ah oo loo heli karo horumariyeyaasha ama isticmaaleyaasha ka diiwaangashan barnaamijka beta bulshada.
Noocyada beta-kii ugu dambeeyay ee Apple waxay ku kordhinayaan hagaajinta gudaha nidaamka wax yar ama aan muuqaal u lahayn isticmaalaha, laakiin waxay la mid yihiin ama ka muhiimsan yihiin kuwa muuqaalka ah. Waa runtaa Waxay u muuqan kartaa mid soo noqnoqota laakiin waa lagama maarmaan in la helo barnaamij nooca beta wanaagsan si aan loogu darin khaladaad ama cillado muhiim ah noocyada ugu dambeeya ee gaara malaayiin isticmaale.
Waa run inkasta oo ay jiraan noocyo badan oo beta ah oo loo sii daayay horumariyeyaasha iyo tijaabiyaasha beta mararka qaarkood cayayaanka ayaa ku soo baxa noocyadii ugu dambeeyaySababtaas awgeed, waa inay caddahay inaysan la mid ahayn kumanaan horumariyayaal adduunka oo dhan inay cusbooneysiiyaan beta, marka loo eego malaayiin isticmaaleyaal ah oo cusbooneysiiya kombuyuutarradooda.
Apple waxay leedahay isticmaaleyaal badan oo tijaabinaya betas tanina waa mid u wanaagsan qof walba, sidoo kale waxay leedahay tijaabiyaha tijaabinta tiknoolajiyada Safari Technology, oo ay suurtagal tahay in lagu hagaajiyo howlgalka Safari noocyada ugu dambeeya. Si kastaba xaalku ha ahaadee toddobaadkan haddii arrimuhu isbadali waayaan galabtii maanta, ma rumaysnin in noocyada beta la soo deyn doono iyo hadda oo leh Jimcaha Madow ee ugu sarreeya iyo Maalinta Thanksgiving ee Mareykanka, Waxay umuuqataa inaan kadhimaneyno betas ilaa usbuuca dambe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » Waxay umuuqataa in todobaadkan aynaan yeelan doonin noocyada beta ee macOS
Unclutter, 3 ka mid ah 1 si loo maareeyo desktop-ka